Rakibaadda - Nanjing Karlter Qurxinta Waxyaabaha Co., Ltd.
Raaxada Vinyl Plank Tilmaamaha Rakibaadda Guji
Fadlan si taxaddar leh u akhri dhammaan tilmaamaha intaadan bilaabin. Rakibid aan habboonayn ayaa burin doonta dammaanadda.
Ka hubi khaladaadka cilladaha sida midabka, farqiga sheen ama jajabka ka hor rakibidda. Hubi in kanaalka uu nadiif yahay oo qashin ka madhan yahay. Faanleyaasha cilladaysan waa in aan la isticmaalin.
Qiyaasta ugu badan ee qolka / socodku waa 40x40 fuudh (12x12 mitir).
Markaad isticmaaleyso faashado wax ka badan hal xirmo, hubi inaad hubiso midabada iyo qaabku inay isu ekaadaan ka hor intaadan bilaabin. Inta lagu jiro rakibidda, isku qas oo isku dheji sanduuq kasta oo dabaqa ah.
Ka qaad sharootada salka ku dhegsan haddii ay suurogal tahay. Haddii ay adag tahay in laga saaro, waxaa laga yaabaa in lagu daayo meesha. Wax taaj oo kale rubuc wareeg ah ayaa lagula talinayaa in lagu daboolo inta u dhexeysa sagxadda dhulka iyo salka hoose.
Gacanta lagu arkay
Si loo helo rakibo guul leh, dhammaan sagxadaha sagxadda waa inay ahaadaan nadiif, qalalan, adag, xitaa iyo heer. Ka qaad jaranjarada rooga iyo koollada ka hor rakibidda.
Si aad u hubiso jiritaanka, dubba dhidib bartamaha sagxadda. Xarig ku xir ciddiyaha oo ku riix guntin sagxadda dhulka. U jiido xarigga geeska ugu fog ee qolka oo baari dabaqa heerka isha wixii nusqaan ah ee u dhexeeya xarigga iyo sagxadda. Dhaqaaq xariga hareeraha wareega qolka adoo ogaanaya wixii godad ah ee ka weyn 3/16 ``. Dabaq kasta oo aan sinnayn oo ka badan 3/16 `` 10kii cagood waa in la ciidsiiyo ama laga buuxiyo buuxiyaal ku habboon.
Ha ku rakibin dusha sare ee leh dhibaatooyinka qoyaanka. Wax cusub oo la taaban karo ayaa u baahan daawo ugu yaraan 60 maalmood ka hor inta aan la rakibin.
Natiijada ugu wanaagsan, heerkulku waa inuu ahaadaa 50 ° - 95 ° F.
Rakibaadda Aasaasiga ah
Ballaca safka koowaad ee looxyadu waa inuu ahaadaa ugu yaraan isla balaca safka ugu dambeeya. Qiyaas qolka oo ku qaybi ballaca looxa si aad u aragto inta loox oo ballac ah oo buuxa la isticmaali doono iyo cabbirka cabbirka loo baahan doono safka ugu dambeeya. Haddii aad rabto, ka jaro loox safka hore ballaciisa ka gaagaaban si aad uga dhigto mid u dhigma safka ugu dambeeya.
Si loo hubiyo in dusha sare ee qurxinta ee PVC uu ku jiro guntinta dhammaatay markii la rakibay, ka saar carrabka dhinaca dheer ee baararka dhinaca taabanaya darbiga. Isticmaal mindi koronto si aad uga dhaliso carrabka dhowr jeer illaa inta ay si fudud uga soo fureyso. (Jaantus 1)
Ka bilow geeska adoo ku dhejinaya guddiga hore dhinackiisa goglan oo derbiga u jeeda. (Jaantus 2)
Si aad ugu dhejiso gudigaaga labaad darbiga, hoos u dhig oo ka xir carrabka dhamaadka qeybta labaad geesaha dhamaadka qeybta hore. Si taxaddar leh u saf geesaha. Looxyadu waa inay ku siman yihiin sagxadda. (Jaantus 3)
Sii wad isku xidhka safka hore illaa aad ka gaadho galka ugu dambeeya ee buuxa. U wareeji qaybta ugu dambeysa 180 ° dhinaca qaabka kore xagga kore. Dhig safka agtiisa oo ka samee meesha ugu dambeysa gunaanadkeedu dhammaado. U isticmaal mindi fiiqan koronto si aad u dhaliso looxa, ku dhaji dariiqa dhibcaha si aad u nadiifiso. Ku soo lifaaq sida kor lagu sharaxay. (Jaantus 4)
Ka bilow safka xiga inta ka harsan qaybta hore ee safka hore si aad u dhiciso qaabka. Cadadku waa inuu ahaadaa ugu yaraan 16 ``. (Jaantus 5)
Si aad u bilawdo safka labaad, u janjee qolka qiyaastii 35 ° oo dhinaca dhinaca dheer ee galka u riix dhinaca jeexdin ee qaybta hore. Markii hoos loo dhigo, looxku wuxuu gujin doonaa meesha. (Jaantus 6)
Raac isla tilmaamaha la socda guddiga xiga, adigoo ku dhejinaya dhinaca dheer marka hore adigoo u weecinaya 35 ° riixayana guddiga cusub sida ugu dhow ee suuragalka ah safkii hore. Hubso in geesaha la safay. Hoos u dhig santuuqa dabaqa, adoo ku xiraya luqadda ugu dambeysa jeexitaanka qaybta hore. Ku sii wad dhigista darfaha harsan qaabkan. (Jaantus 7)
Si aad ugu habboonaato safka ugu dambeeya, si toos ah saf taxane ah loox dusha sare safka hore ee looxyada la rakibay adoo carrabka ku haaya isla jihada looxyada rakiban. Saar guddi kale derbiga dushiisa si aad tusaale ahaan ugu isticmaasho. Raadi xariijin looxyada. Iska yaree guddiga oo ku dheji booska. (Jaantus 8)
Si aad u gooyso hareeraha albaabbada iyo hawo-kuleylka, marka hore u jaro gunta dhererka saxda ah. Kadib dhig qeybta goynta dhinaceeda dhabta ah oo isticmaal taliye si aad u cabirto meelaha laga jarayo. Calaamadee guddiga oo jar qodobbada calaamadeysan.
Wareeji alwaaxa albaabka adoo u rogaya qaanad gadaal isla markaana isticmaalaya wax lagu sawiro si aad u jarto dhererka lagama maarmaanka ah si darbiyada ay si fudud ugu hoos galaan looxyada.